PUBG ကစားလို့အကောင်းဆုံး Budget Smartphone5လုံး
30 Nov 2018 . 5:41 PM
ဂိမ်းကစားဖို့ တော်ရုံ Skill ရှိနေရုံနဲ့ Winner ဖြစ်မယ် ကျိန်းသေတွက်မရတာ ပရိသတ်တွေ သိပြီးသားဖြစ်ကြမှာပါ။ တခါတခါ ဖုန်းဟမ်းသွားလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ဖုန်းလေးနေလို့ ဂိမ်းကစားနေရင်း ထထစ်သွားတာမျိုး၊ ရပ်နေတာမျိုးဖြစ်နေရင် အင်မတန်ဒေါသဖြစ်စရာကောင်းပါတယ်။ ကိုယ့် Temper ကိုထိန်းချုပ်နိုင်ရင်တော့ တမျိုးပေါ့နော်၊ ပွဲကကောင်း ဇာတ်ရှိန်ကလည်းတက်နေတဲ့အချိန်နဲ့ သွားတိုးရင်တော့ ဖြစ်လာမယ့်အကျိုးဆက်က မတွေးဝံ့စရာပါပဲ။
ဒါကြောင့်မလို့ ကိုယ့်အရည်ချင်းပံ့ပိုးနိုင်ဖို့ Gaming Gear က အသင့်တင့်ပြည့်စုံနေဖို့လိုတယ်၊ Frame Rate အရမ်းမမြင့်၊ Display ကလည်းဝဲမဆွဲ၊ Graphics Performance ကိုလည်း HD အနေထားထိတွန်းပေနိုင်မယ့် Hardware ကောင်း၊ စမတ်ဖုန်းကောင်ရှိရင်တော့ ပိုပြည့်စုံတာပေါ့နော်။ ဂိမ်းကိုတော့ Run နိုင်ပါရဲ့၊ fps Slutter (ထစ်) နေမယ်၊ ရုပ်ထွက်ကို အနိမ့်ဆုံးထားဆော့ထားရလို့ ရန်သူလား၊ အပင်လား မသဲမကွဲဖြစ်နေတဲ့အထိ အခြေနေဆိုးနေရင်တော့ Chicken Dinner ဆိုတာဝေလား၊ ဝေးလာလို့ ပြောရမှာပါ။ အဲ့အတွက် PUBG ကစားဖို့ရည်ရွယ်ထားရင် စိတ်ချမ်းချမ်းသာသာ ကစားနိုင်အောင်၊ ကောင်းကောင်းလက်စွမ်းပြနိုင်အောင်လို့ မြန်မာငွေ ၂ သိန်းခွဲဝန်းကျင် အများဆုံး ၃ သိန်းနဲ့ ဝယ်ယူနိုင်မယ့် စမတ်ဖုန်း5လုံးကို စုစည်းတင်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
5. Redmi Note5(Max 275,000 mmk)
Xiaomi ရဲ့ Redmi Note5စမတ်ဖုန်းကိုတော့ လူကြိုက်များမယ်ထင်ပါတယ်။ RAM 6GB ၊ Storage 64GB ပါတဲ့မော်ဒယ်တောင်မှ မြန်မာငွေ ၂ သိန်း ၇ သောင်းနဲ့ ဝယ်နိုင်မှာဆိုတော့ Multi-tasking အတွက်လည်း စိတ်မပူရပါဘူး။ Snapdragon 636 Processor ၊ Adreno 509 GPU နဲ့ ပေါင်းစပ်ထားတဲ့ ဒီစမတ်ဖုန်းဟာဆိုရင် HD Setting မှာ Graphics Medium နဲ့ ကစားဖို့အဆင်သင့်ပါပဲ။ 5.99″ Display နဲ့ Full HD+ Resolution ကလည်း ရုပ်ရှင်ကြည့်တာ၊ ဂိမ်းကစားတာမျိုးအတွက် ပြည့်စုံတဲ့အနေထားမှာရှိနေတယ်လို့ပြောရမှာပါ။ 12MP (f/2.1) + 5MP Dual Camera ၊ 20MP Selfie Camera ပါဝင်တာကလည်း အကြိုက်တွေ့စေဦးမှာပါ၊ Fast Battery Charging ၊ 4,000 mAh Battery က ၄၊ ၅ ပွဲကစားဖို့အတွက် အေးဆေးပါပဲ။
ဒီ Meizu ဖုန်းလေးက 2017 မော်ဒယ်ဖြစ်နေတယ်ဆိုပေမယ့် 1080p Resolution Screen + 5.5″ Display နဲ့ PUBG ၊ Mobile Legends ဂိမ်းတွေ ကိုင်တွယ်ပေးဖို့ အဆင်သင့်ပါပဲ။ Snapdragon 625 Processor ၊ 4GB RAM ၊ 64GB Storage နဲ့ Adreno 506 GPU အသုံးပြုထားတဲ့ M6 Note စမတ်ဖုန်းကို မြန်မာငွေ ၂ သိန်း ၇သောင်း ၉ထောင်ကျပ်နဲ့ ဝယ်ယူနိုင်ပါမယ်။ Redmi Note5နဲ့ ယှဉ်ရင် အားပျော့သယောင်ရှိပေမယ့် ကင်မရာပိုင်းမှာ အားသာချက်ကလေးရှိပါတယ်။ 12MP (f/1.9)+ 5MP Dual Camera ၊ 16MP Selife Camera သုံးထားတယ်။ Fast Battery Charging ပါရှိပြီး 4,000 mAh Battery သုံးပေးထားသေးလို့ Long Session Gaming အတွက်အိုကေပါပဲ။
3. Mi 6X
မြန်မာငွေ ၂ သိန်းခွဲနဲ့ ဝယ်ယူရရှိနိုင်မယ့် Mi 6X ကတော့ Mid-range စွမ်းဆောင်ရည်ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ စမတ်ဖုန်းလို့ပြောရင် မှားမယ်မထင်ပါဘူး။ Display အရည်သွေးကစ ဖုန်း Performance ပိုင်းမှာပါ ပြည့်စုံကောင်းမွန်နေတဲ့ Mi 6X မှာ Snapdragon 660 (Kyro) Processor ၊ 4GB RAM နဲ့ 64GB Storage ပါဝင်တယ်၊ Adreno 512 GPU နဲ့ 4K ဗီဒီယိုကိုင်တွယ်ပေးနိုင်တဲ့အထိ အိုကေနေတယ်။ ဒါကြောင့် ကင်မရာပိုင်း ပိုအဆင့်မြင့်သလို 12MP (f/1.8)+ 20MP (f/1.8) Dual Camera ၊ 20MP (f/2.2) Selfie Camera ပါဝင်တယ်။ အရည်သွေးမြင့် 5.99″ Display နဲ့ Full HD+ Resolution သုံးထားတယ်၊ Type-C Adapter နဲ့ Quick Charge (3.0) ထောက်ပံ့ထားတယ်၊ ဒီလိုပြည့်စုံနေတာကိုမှ နည်းနည်းလေးအားမရစရာက 3,000 mAh Battery ပဲပါတာလေးပါပဲ။
2. Zenfone Max Pro M1
Asus မိတ်ဆက်ထားတဲ့ Max Pro M1 စမတ်ဖုန်းနဲ့ အတော်လေးရင်းနှီးကြမယ်ထင်ပါတယ်။ Budget တန်းမှာ လူကြိုက်အများဆုံးစမတ်ဖုန်းအဖြစ် ရပ်တည်နေပြီး မြန်မာငွေ ၂ သိန်းခွဲဝန်းကျင်နဲ့ ဝယ်ယူနိုင်ပါမယ်။ ဒီလိုဈေးသက်သာနေလို့ စွမ်းဆောင်ရည်လျှော့မထားဘဲ Budget တန်းမှာမြင်ရခဲတဲ့ IPS LCD သုံးထားပါတယ်။ 5.99″ ရှိသလို Full HD+ Resolution ပါဝင်တယ်။ Snapdragon 636 (Kyro) Processor ၊ 3GB RAM ၊ 64GB Storage သုံးထားပြီး Adreno 509 GPU နဲ့တွဲဖက်ထားပါတယ်။ ကင်မရာကလည်း 4K Footage ရိုက်ကူးပေးနိုင်ပြီး 13MP (f/2.2)+ 5MP (2.4) Dual Camera ၊ 8MP Selfie Camera သုံးထားပေမယ့် Specification အရဆိုရင် Mi 6X ထက် စွမ်းဆောင်ရည်ပိုနည်းမယ်လို့ ပြောနိုင်ပါတယ်။ Fast Battery Charging မပါပေမယ့်လို့ 5,000 mAh Battery ထည့်ပေးထားတာက ဂိမ်းကြာကြာကစားချင်သူအကြိုက်လို့ပဲပြောရမှာပါ။
Xiaomi ရဲ့ Note6Pro က PUBG ကစားဖို့ ပြည့်စုံတယ်ဆိုပေမယ့်လို့ အရည်သွေးမြင့် Display ၊ Selfie ဝါသနာအိုးတွေအတွက် Dual Selfie Camera ပါဝင်သေးလို့ Alternate Model အနေနဲ့ ထည့်သွင်းထားတာပါ။ LTPS (Low Temperature Polysilicon) အမျိုးစား IPS Panel အသုံးပြုထားပြီး သာမန် Panel တွေထက် ပါဝါအစားပိုနည်းမယ်၊ 6.26″ Display ကို Gorilla Glass (အမျိုးမည်မသိရ) နဲ့ ကာကွယ်ထားမယ်၊ Full HD+ Resolution ပါဝင်မယ်၊ 12MP (f/1.9)+5MP (f/2.2) Dual Rear Camera ၊ 20MP (f/2.0)+2MP(f/2.2) Selfie Camera ပါဝင်တာက ကျေနပ်စရာပါ။
မြန်မာငွေ ၃ သိန်းခန့်ကျသင့်မယ့် Note6Pro မှာ Snapdragon 636 Processor ၊ 3GB RAM ၊ 64GB Storage ပါရှိပြီး Adreno 509 GPU နဲ့ တွဲဖက်ထားပါတယ်။ Fast Battery Charging စနစ်ပါရှိပြီး 4,000 mAh Battery ပါဝင်သေးလို့ PUBG ကစားဖို့သာမက ဘက်စုံသုံး စမတ်ဖုန်းကောင်းလိုက်ရှာနေရင် ဒီ Budget မော်ဒယ်5မျိုးကို အရင်စဉ်းစားကြည့်ပါလို့ ပြောရင်း နိဂုံးချုပ်လိုက်ရပါတယ်။
PUBG ကစားလို့အကောငျးဆုံး Budget Smartphone5လုံး
ဂိမျးကစားဖို့ တျောရုံ Skill ရှိနရေုံနဲ့ Winner ဖွဈမယျ ကြိနျးသတှေကျမရတာ ပရိသတျတှေ သိပွီးသားဖွဈကွမှာပါ။ တခါတခါ ဖုနျးဟမျးသှားလို့ပဲဖွဈဖွဈ၊ ဖုနျးလေးနလေို့ ဂိမျးကစားနရေငျး ထထဈသှားတာမြိုး၊ ရပျနတောမြိုးဖွဈနရေငျ အငျမတနျဒေါသဖွဈစရာကောငျးပါတယျ။ ကိုယျ့ Temper ကိုထိနျးခြုပျနိုငျရငျတော့ တမြိုးပေါ့နျော၊ ပှဲကကောငျး ဇာတျရှိနျကလညျးတကျနတေဲ့အခြိနျနဲ့ သှားတိုးရငျတော့ ဖွဈလာမယျ့အကြိုးဆကျက မတှေးဝံ့စရာပါပဲ။
ဒါကွောငျ့မလို့ ကိုယျ့အရညျခငျြးပံ့ပိုးနိုငျဖို့ Gaming Gear က အသငျ့တငျ့ပွညျ့စုံနဖေို့လိုတယျ၊ Frame Rate အရမျးမမွငျ့၊ Display ကလညျးဝဲမဆှဲ၊ Graphics Performance ကိုလညျး HD အနထေားထိတှနျးပနေိုငျမယျ့ Hardware ကောငျး၊ စမတျဖုနျးကောငျရှိရငျတော့ ပိုပွညျ့စုံတာပေါ့နျော။ ဂိမျးကိုတော့ Run နိုငျပါရဲ့၊ fps Slutter (ထဈ) နမေယျ၊ ရုပျထှကျကို အနိမျ့ဆုံးထားဆော့ထားရလို့ ရနျသူလား၊ အပငျလား မသဲမကှဲဖွဈနတေဲ့အထိ အခွနေဆေိုးနရေငျတော့ Chicken Dinner ဆိုတာဝလေား၊ ဝေးလာလို့ ပွောရမှာပါ။ အဲ့အတှကျ PUBG ကစားဖို့ရညျရှယျထားရငျ စိတျခမျြးခမျြးသာသာ ကစားနိုငျအောငျ၊ ကောငျးကောငျးလကျစှမျးပွနိုငျအောငျလို့ မွနျမာငှေ ၂ သိနျးခှဲဝနျးကငျြ အမြားဆုံး ၃ သိနျးနဲ့ ဝယျယူနိုငျမယျ့ စမတျဖုနျး5လုံးကို စုစညျးတငျပွပေးလိုကျပါတယျ။
Xiaomi ရဲ့ Redmi Note5စမတျဖုနျးကိုတော့ လူကွိုကျမြားမယျထငျပါတယျ။ RAM 6GB ၊ Storage 64GB ပါတဲ့မျောဒယျတောငျမှ မွနျမာငှေ ၂ သိနျး ၇ သောငျးနဲ့ ဝယျနိုငျမှာဆိုတော့ Multi-tasking အတှကျလညျး စိတျမပူရပါဘူး။ Snapdragon 636 Processor ၊ Adreno 509 GPU နဲ့ ပေါငျးစပျထားတဲ့ ဒီစမတျဖုနျးဟာဆိုရငျ HD Setting မှာ Graphics Medium နဲ့ ကစားဖို့အဆငျသငျ့ပါပဲ။ 5.99″ Display နဲ့ Full HD+ Resolution ကလညျး ရုပျရှငျကွညျ့တာ၊ ဂိမျးကစားတာမြိုးအတှကျ ပွညျ့စုံတဲ့အနထေားမှာရှိနတေယျလို့ပွောရမှာပါ။ 12MP (f/2.1) + 5MP Dual Camera ၊ 20MP Selfie Camera ပါဝငျတာကလညျး အကွိုကျတှစေ့ဦေးမှာပါ၊ Fast Battery Charging ၊ 4,000 mAh Battery က ၄၊ ၅ ပှဲကစားဖို့အတှကျ အေးဆေးပါပဲ။
ဒီ Meizu ဖုနျးလေးက 2017 မျောဒယျဖွဈနတေယျဆိုပမေယျ့ 1080p Resolution Screen + 5.5″ Display နဲ့ PUBG ၊ Mobile Legends ဂိမျးတှေ ကိုငျတှယျပေးဖို့ အဆငျသငျ့ပါပဲ။ Snapdragon 625 Processor ၊ 4GB RAM ၊ 64GB Storage နဲ့ Adreno 506 GPU အသုံးပွုထားတဲ့ M6 Note စမတျဖုနျးကို မွနျမာငှေ ၂ သိနျး ၇သောငျး ၉ထောငျကပျြနဲ့ ဝယျယူနိုငျပါမယျ။ Redmi Note5နဲ့ ယှဉျရငျ အားပြော့သယောငျရှိပမေယျ့ ကငျမရာပိုငျးမှာ အားသာခကျြကလေးရှိပါတယျ။ 12MP (f/1.9)+ 5MP Dual Camera ၊ 16MP Selife Camera သုံးထားတယျ။ Fast Battery Charging ပါရှိပွီး 4,000 mAh Battery သုံးပေးထားသေးလို့ Long Session Gaming အတှကျအိုကပေါပဲ။
မွနျမာငှေ ၂ သိနျးခှဲနဲ့ ဝယျယူရရှိနိုငျမယျ့ Mi 6X ကတော့ Mid-range စှမျးဆောငျရညျပိုငျဆိုငျထားတဲ့ စမတျဖုနျးလို့ပွောရငျ မှားမယျမထငျပါဘူး။ Display အရညျသှေးကစ ဖုနျး Performance ပိုငျးမှာပါ ပွညျ့စုံကောငျးမှနျနတေဲ့ Mi 6X မှာ Snapdragon 660 (Kyro) Processor ၊ 4GB RAM နဲ့ 64GB Storage ပါဝငျတယျ၊ Adreno 512 GPU နဲ့ 4K ဗီဒီယိုကိုငျတှယျပေးနိုငျတဲ့အထိ အိုကနေတေယျ။ ဒါကွောငျ့ ကငျမရာပိုငျး ပိုအဆငျ့မွငျ့သလို 12MP (f/1.8)+ 20MP (f/1.8) Dual Camera ၊ 20MP (f/2.2) Selfie Camera ပါဝငျတယျ။ အရညျသှေးမွငျ့ 5.99″ Display နဲ့ Full HD+ Resolution သုံးထားတယျ၊ Type-C Adapter နဲ့ Quick Charge (3.0) ထောကျပံ့ထားတယျ၊ ဒီလိုပွညျ့စုံနတောကိုမှ နညျးနညျးလေးအားမရစရာက 3,000 mAh Battery ပဲပါတာလေးပါပဲ။
Asus မိတျဆကျထားတဲ့ Max Pro M1 စမတျဖုနျးနဲ့ အတျောလေးရငျးနှီးကွမယျထငျပါတယျ။ Budget တနျးမှာ လူကွိုကျအမြားဆုံးစမတျဖုနျးအဖွဈ ရပျတညျနပွေီး မွနျမာငှေ ၂ သိနျးခှဲဝနျးကငျြနဲ့ ဝယျယူနိုငျပါမယျ။ ဒီလိုဈေးသကျသာနလေို့ စှမျးဆောငျရညျလြှော့မထားဘဲ Budget တနျးမှာမွငျရခဲတဲ့ IPS LCD သုံးထားပါတယျ။ 5.99″ ရှိသလို Full HD+ Resolution ပါဝငျတယျ။ Snapdragon 636 (Kyro) Processor ၊ 3GB RAM ၊ 64GB Storage သုံးထားပွီး Adreno 509 GPU နဲ့တှဲဖကျထားပါတယျ။ ကငျမရာကလညျး 4K Footage ရိုကျကူးပေးနိုငျပွီး 13MP (f/2.2)+ 5MP (2.4) Dual Camera ၊ 8MP Selfie Camera သုံးထားပမေယျ့ Specification အရဆိုရငျ Mi 6X ထကျ စှမျးဆောငျရညျပိုနညျးမယျလို့ ပွောနိုငျပါတယျ။ Fast Battery Charging မပါပမေယျ့လို့ 5,000 mAh Battery ထညျ့ပေးထားတာက ဂိမျးကွာကွာကစားခငျြသူအကွိုကျလို့ပဲပွောရမှာပါ။
Xiaomi ရဲ့ Note6Pro က PUBG ကစားဖို့ ပွညျ့စုံတယျဆိုပမေယျ့လို့ အရညျသှေးမွငျ့ Display ၊ Selfie ဝါသနာအိုးတှအေတှကျ Dual Selfie Camera ပါဝငျသေးလို့ Alternate Model အနနေဲ့ ထညျ့သှငျးထားတာပါ။ LTPS (Low Temperature Polysilicon) အမြိုးစား IPS Panel အသုံးပွုထားပွီး သာမနျ Panel တှထေကျ ပါဝါအစားပိုနညျးမယျ၊ 6.26″ Display ကို Gorilla Glass (အမြိုးမညျမသိရ) နဲ့ ကာကှယျထားမယျ၊ Full HD+ Resolution ပါဝငျမယျ၊ 12MP (f/1.9)+5MP (f/2.2) Dual Rear Camera ၊ 20MP (f/2.0)+2MP(f/2.2) Selfie Camera ပါဝငျတာက ကနြေပျစရာပါ။
မွနျမာငှေ ၃ သိနျးခနျ့ကသြငျ့မယျ့ Note6Pro မှာ Snapdragon 636 Processor ၊ 3GB RAM ၊ 64GB Storage ပါရှိပွီး Adreno 509 GPU နဲ့ တှဲဖကျထားပါတယျ။ Fast Battery Charging စနဈပါရှိပွီး 4,000 mAh Battery ပါဝငျသေးလို့ PUBG ကစားဖို့သာမက ဘကျစုံသုံး စမတျဖုနျးကောငျးလိုကျရှာနရေငျ ဒီ Budget မျောဒယျ5မြိုးကို အရငျစဉျးစားကွညျ့ပါလို့ ပွောရငျး နိဂုံးခြုပျလိုကျရပါတယျ။